Muxuu yahay mustaqbalka Al-shabaab? - BBC Somali
Muxuu yahay mustaqbalka Al-shabaab?
Barnaamijka Waxay Ila Tahay ee galabta waxaanu kaga hadli doonnaa duulaanka ka dhanka ah Xarakada Al-shabab, xilli ciidammada huwanta ah ay la wareegeen degmada Cadale ee gobolka Shabeellada Dhexe, iyadoo war haatan soo dhacayna uu sheegayo in Xarakada al-Shabaab ay isaga baxeen magaalada xeebta ah ee Baraawe oo aheyd magaaladii ugu muhiiimsaneyd oo ay Xarakadu maamulaysay.
Dhanka kale todobaadkan maamulka Puntland ayaa sheegay inuu Xarakada kala wareegay gacan ku haynta buuralayda Galgala.
Haddaba muxuu yahay mustaqbalka Alshabaab? Ma oran karnaa waa ay u dhammaatay alShabaab, mise waxa ay la soo bixi doonaan farsamooyin dagaal oo horleh?
Su'aalahaas iyo kuwo kale ayaa waxaanu ku faaqidi doonaa barnaamijkeenna haddii Eebe ogolaado saacadda soo socota.
Waxaa barnaamijka ka qayb gelaya oo marti inoogu ah aqoonyahanno iyo dad howlaha ammaanka aqoon durugsan u leh.
Waxaa ka mid ah: Wasiir kuxigeenka Gaashaandhiga, Cabdalla Xuseen Cali, oo ku sugan magaalada Baydhabo.
Prof Cabdi Ismaaciil Samatar, oo wax ka dhiga jaamacadda Minissota ee waddanka Mareykanka, sidoo kale waxa uu cilmi baare sare ka yahay jaamacadda Pretoria ee Koonfur Afrika, qoraalo badanna waxa uu ka sameeyay Soomaaliya iyo colaadda ka taagan, waxa uu ku sugan yahay waddanka Mareykanka.
Sidoo kale barnaamijka waxaa marti inoogu ah Bare Sare Cabdiwahaab Sheekh Cabdisamad, oo ka tirsan jaamacadda Kenyatta ee magaaladatan Nairobi, qoraalo ayuu ka sameeyay colaadda daba dheeraatay ee Soomaaliya, dhawaanna Muqdisho ayuu ka soo laabtay.
Barnaamijka waxaa soo jeedinaya Cabdifitaax Ibraahim Cagayare